NgoNovemba 2019-Funda ukuRhweba
Ukubuyela umva ngeveki kubonakala kubuthathaka- ngaba iBitcoin ikwiDrop kwakhona?
30 Novemba 2019 | Ukuhlaziywa: 30 Novemba 2019
Ngexesha leveki, i-Bitcoin irekhodishe i-6600 yeedola ngenyanga emva kokubona uthotho lokwehla malunga neeveki ezine. Nge-25 kaNovemba, iBitcoin yaphinda yabuya amandla ngaphezulu kwe- $ 7000. Oku kuphulukana kukhokelele ekwenziweni kwentloko kunye namagxa egxalathelweyo ebaluleke kakhulu kurhwebo lweveki ngeemvakalelo ezininzi.
Ngeli xesha, i-Bitcoin ijongene nokuchasana okunzima kwi-iH & S neckline ($ 7400), ethe ekugqibeleni yaphuka emva kokungazinzi okubonakalayo okwadubula ixabiso laya ngqo kwi- $ 7670.
Kutshanje, abanye abathengisi be-crypto kunye nabahlalutyi baqikelela ukuba ixabiso leBitcoin kunokwenzeka ukuba lijongane nokunye ukuhla. Ngeli xesha, uninzi lweembono ze-bearish zibonakala ngathi zijikeleze i-cryptocurrency ekhokelayo kwakhona njengoko abanye abahlalutyi bekholelwa ukuba inverse-and-kufanele ipateni ibonakale ifikelele kwinqanaba eliphambili lokuxhathisa elifutshane le- $ 7800- apho kunokwenzeka khona umlenze we-bearish ngaphezulu kunokwenzeka ukuba idlale.
Sele ndizitshilo ezi zinto, iBitcoin ngoku yenze ipateni ekhulayo ebonakala ngathi ilungele ukwehla okunzima. Ukulandela i-twit ngumrhwebi, osandula ukwabelana ngombono ngokulandelayo okunokwenzeka kwiBitcoin. Nantsi into Ukutya uClark uluvo:
Ukubuyela kuqikelelo lwamva nje, i-Bitcoin inokudala isezantsi sonyaka ophakathi ukuba ipateni yangoku yomda ibonwe kwitshathi yehora iyadlala. Elinye iqhekeza elinomdla lajijwa kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo ngu ikhowudi, INkosi yeNtloko yeBitcoin kunye noBuchule boBugcisa.
Le grafu yeenkcukacha-manani ingentla ibonisa uthelekiso phakathi komvuzo webhloko kunye nomgangatho wexabiso le-BTC. Njengoko sibona, iBitcoin ngoku ivala "iindawo zosulelo" emva kokuwela umgca wediagonal kwixabiso lesithathu. Ukusuka kumbono wobuchwephesha, ixabiso leBitcoin kunokwenzeka ukuba lihle kancinci ngaphambi kokuqalisa kwakhona.
Nangona kunjalo, asikakuboni ukubuyela umva okomeleleyo okwangoku. Mhlawumbi, iyakwenzeka ukuba iBitcoin inokwenza i-8000 yeedola kwaye ikakhulu i-9000 yeedola. Kodwa kuthathelwa ingqalelo apho ixabiso leBitcoin ngoku linamathele khona - kwindawo enqabileyo, kukho ithuba eliphezulu lokuwa kunokunyuka.
tags Umbono, Ukubikezela
29 Novemba 2019 | Ukuhlaziywa: 29 Novemba 2019
Ripple (XRP) Uhlalutyo lwamaxabiso-i-XRP iyaqhubeka nokuhamba ngobuvila njengeeBulls Zisokola
Ukusukela ngokuvulwa kwemihla ngemihla, i-XRP ibonakalise uphawu lokufumana kancinci, ukuya kuthi ga kwi-1.07% yeenzuzo. Ukulungiswa kunokubaluleka xa inani linokungena kwintengiso. Ngaphandle koko, ixabiso leXRP liya kuqhubeka nokutsala ngobuvila. Nangona kunjalo, akukho mva kakhulu ukuqokelela isixa esithile seXRP njengoko ixabiso linokuba nomtsalane ngakumbi ukuba ixabiso liyakhula kwixesha elizayo. Okwangoku, i-XRP ixabiso ngama- $ 0.23 ngexabiso lokurhweba elixabisa i-1.3 yezigidigidi zeedola.
U-Ripple (XRP) Uhlalutyo lwamaxabiso: Itshathi ye-4H-Bullish
Amanqanaba aphambili okumelana: $ 0.25, $ 0.26, $ 0.284
Amanqanaba enkxaso ephambili: $ 0.22, $ 0.21, $ 0.20
Itshathi yeeyure ezi-4 ze-XRP ibonisa ukubambezeleka kokukhula emva kokuqinisekisa ukuphuma komfuziselo wonxantathu izolo. Emva kokuzama kwakhona inqanaba lokuqhekeka kwe- $ 0.223, i-XRP iqhubekile nokwenziwa kwe-bullish, ebiyinto edangeleyo okoko intengiso ibuye nge-25 kaNovemba.
I-XRPUSD, 4H Itshathi-nge-29 kaNovemba
Ngaphandle koko, uxinzelelo lokuthenga olucothayo kunokwenzeka ukuba lufikelele kwi-0.25, i-0.266 yeedola kunye ne-0.284 yeedola kwiintsuku ezimbalwa ezizayo. Ukujonga i-RSI, i-Xipp ye-Ripple ilandela uluvo oluqhubayo. Ngokuchasene noko, i-MACD iphantse yenyuka yaya kwindawo elungileyo. I-crossover ecacileyo iya kuqinisekisa inyathelo lokunyusa ukubuyela kwintengiso. Kwimeko yokwehla okubukhali, kukho inkxaso esondeleyo kwi- $ 0.22 nakwi- $ 0.21. Ukongeza, umgca wokugqibela wokhuselo weenkunzi zeenkomo yi- $ 0.20- isezantsi ngeveki.
Izolo, i-Ripple (i-XRP) ibonwe ukuba ilandela ipateni ekhulayo kwitshathi yeyure. Njengoko sibona, isenzo sexabiso sihlonipha isinqe esiya kuthi ga ngoku. Ukufikelela kwindawo yokuqhekeka, i-XRP kunokwenzeka ngakumbi ukuba ihambe ngaphezulu komtshato. Oku kunokuvumela iinkunzi zenkomo ukuba ziphinde ziphinde ziphinde zikwazi ukumelana ne- $ 0.246 ngaphandle kwexesha.
XRPUSD, itshathi ngeyure-Novemba 29
Ukuqhubekeka okunyanzelekileyo kunokuqhubela phambili i-XRP ukuya kwi-20 kaNovemba ephezulu nge- $ 0.257. Ngoku, i-XRP ifumana umzuzu kwizalathi zobuchwephesha, ngakumbi i-MACD eqala nje ukunyuka phezulu. Ukuguquka okuqhubekayo kunokubangela ukuthenga okukhulu kwiimarike.
Ukujonga ukubanjwa kwangoku kwinqanaba le-RSI 70, i-XRP inokubuyela umva kwinkxaso yemali kwi-0.225 yeedola. Ukophula inkxaso kungakhokelela kuthengiso olunzima kwimarike njenge- $ 0.215 kunye ne- $ 0.205 yenkxaso inokuphinda ivele. Nokuba yeyiphi na imeko yentengiso, i-Ripple's XRP ijongeka ikwimeko yokuma kwexesha.
Thenga ukungena: $ 0.23
I-TP: $ 0.25
I-Eurjpy ihlasela indawo yokumelana kwakhona kwinqanaba elikwi-120.67
Imali yaseYurophu exhaphakileyo ixabise amanqaku angama-25 ngokuchasene ne-yen yaseJapan ngoLwesine, ngelixa igqitywa kwinqanaba le-120.54, ifumana iipipsi ezisi-7 (0.06%) ngevolumu ephantsi. Ujoliso olufanayo kubathengi lunokuba kufutshane necala elingaphezulu lendawo ethe tyaba yokuthintela kwinqanaba kwi-121.00.
Amanqanaba okumelana: 127.52, 123.37, 121.47
Amanqanaba enkxaso: 119.24, 117.08, 115.83
I-EURJPY yexesha elide iTrend: Bearish
Izikhombisi zobuchwephesha zibonisa ukuba inqanaba lotshintshiselwano luya kuba phezulu ngeli xesha leseshoni. Ukuba inqanaba lokumelana ligcinwa, lenziwe ngumda ophezulu wendawo ethe tyaba, inqanaba lotshintshiselwano lwemali lunokubuyiselwa ezantsi kwiseshoni elandelayo yorhwebo.
Ngokubanzi, inqanaba lokubuyela umva le-115.83 kwixesha elide liqwalaselwa kuphela njengokunyuka kokulungisa, ngelixa kwimeko yentshukumo entsha, uxhathiso oluphezulu ngenxa yokuncitshiswa kochaselo kunokuba nokuqulatha kwangaphambili. Ukophula inkxaso yenqanaba kwi-117.08 kungangumqondiso wokuqala wokwehla kwezantsi ukusuka kwinqanaba le-127.52 ukuya kwinqanaba le-115.83 eliphantsi.
I-intraday bias kwi-EURJPY ihlala ingathathi hlangothi okwangoku. Ngenqanaba lenkxaso ye-119.24 ihambile, ukonyuka kwexabiso ukusuka kwinqanaba elikwi-115.83 kulungele ukuqhubeka. Kwicala elifanelekileyo, ngaphezulu kwenqanaba eliku-120.67, i-bias inokunyusa ukuxhathisa kwinqanaba le-121.47.
Nangona kunjalo, ikhefu eliqinileyo kwinqanaba le-119.24 linokuthi ukuphindaphinda kwenqanaba kwi-115.86 kuphelile. I-intraday bias isenokuba phantsi ukuxhasa inqanaba kwi-117.08 yokuqinisekisa le meko, nangona isekude-kude kwexesha elide, imeko yexesha elifutshane iyatshintsha.
Ixabiso lokungena: 121.47
IiBhakt Bitoin zexesha elizayo zorhwebo ezantsi kweedola ezingama-20 ezigidi zemihla ngemihla, ngaba sisizathu esinokubangela ukungazinzi okungabalulekanga?
Ixabiso leBitcoin likhula ngokucothayo okwethutyana ngoku, ngenxa yokuthengisa kweShakeout kutsha nje kwimakethi yonke ye-crypto. Kodwa kutshanje, kuye kwavela ukuba iBitcoin ifumene isezantsi enyakeni phakathi kweedola ezingama-6600 nge-25 kaNovemba. Olu setyenziso lwalufana nse nolwasekupheleni kuka-Okthobha ukungazinzi okwathi emva koMongameli wase-China, u-Xi Ping wenza isibhengezo kwimfuno yokwamkela imali ye-cryptocurrency kwaye IBlockchain kwilizwe.
Emva kwesibhengezo, i-BTC ibetha i-10370 yeedola kwisithuba seentsuku ezintathu, isenza i-cryptocurrency yokuqala yokurekhoda ukunyuka okuphezulu kwemihla ngemihla kwimbali yeBitcoin kwaye kwangaxeshanye kuphawula u-Okthobha ophezulu. Okwangoku, iintsuku ezintathu zokuziva zichanekile zibonakaliswe ngamakhandlela awomeleleyo.
Kuyo yonke le nyanga, ibiyinyani ye-Bitcoin emva kokuseka i-6600 yeedola ngeveki. Nangona kunjalo, i-Bitcoin ikwazile ukubuyela umva kwixabiso le- $ 7000 yexabiso ngexabiso langoku kwi- $ 7520. Ukuthenga i-Bitcoin ngalo mzuzu kunokuba yinto engathandekiyo kubarhwebi abathile kunye nabatyali mali njengevolthi kunye nokungazinzi kunokubonakala kungabalulekanga kwiintsuku ezidlulileyo.
Kodwa kulandela uhlalutyo olubalaseleyo lwe-twitter olwenziwe yi-SKEW namhlanje, iBitcoin ibonakala ngathi inyuka ngalo mhla ukusukela oko imarike ibuye yafunyanwa kwiinyanga ezintandathu eziphantsi. Njengoko kubonisiwe kwigrafu yeenkcukacha manani yemihla ngemihla engezantsi, i-Bakkt BTC Futures irekhoda umdla ovulekileyo kunye nevolumu emalunga ne- $ 40 yezigidi kule veki kodwa ngoku ithengisa ngaphantsi komthamo wemihla ngemihla weedola ezingama-20.
Ewe, ngokoluvo lwam, iBitcoin ibuyisela amandla, nangona inokubonakala icotha ngoku ngenxa yokungazinzi. Kodwa inyani iya kuhlala ikho isidingo semarike yokuqhuba ukulungiswa ngaphambi kokuba yenze indlela ephambili.
Ukuqinisekisa ukunyuswa kwexesha elide, i-BTC ifuna ukubuyisa amanqanaba amaxabiso e-9000. Kwelinye icala, sinokuqala ukuqaphela ukufinyeza iBitcoin ukuba amaxabiso ehla ezantsi kweenyanga ezintandathu eziphantsi. Okwangoku, abathengisi be-swing babonakala ngathi benza iintloko kwindawo ende.
tags Ikamva le-BTC, Inzala evulekileyo
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (i-ETH) -i-ETH iyekisa ukuQulunqwa kweBullish yokuBuyiselwa endaweni eseMpilweni
U-Ethereum wabona ukonyuka okuncinci kwiintsuku ezidlulileyo ezenze ukuba uphawu lwaphule kancinane ngaphezulu kwe- $ 155. Ukususela kwikhefu, i-ETH ifumene kunzima ukuqhubela phambili. Okwangoku, imali ye-imali yedatha ifumana isixa esisezantsi sevolumu kunye nokungazinzi okoko kwaqhamka ngo-Novemba 27. Ukuba ukuseta kwexesha elifutshane kusilela ukwenza izinto, i-ETH inokubuyela kwi-bearish yangaphambili. Njengexesha lokubhalwa, i-Ethereum ixabiso layo li- $ 152.
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH): Itshathi yemihla ngemihla-Ukuthwala
Amanqanaba aphambili okumelana: $ 163, $ 177
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 141, $ 131
Imbonakalo yemihla ngemihla ye-Ethereum iphakamisa imeko ye-bearish ngoku eyenza ipateni ye-wedge. Ukulandela le patheni, akukho mqondiso wokukhula ngamandla kwe-Ethereum ngalo mzuzu de kube kukhe kuqhekeke ukwahlukana, mhlawumbi kwi-177 yeedola. Nangona kunjalo, abathengi banokuthi bahlangane ngokukhawuleza kwi-163 yeedola ukuba uxinzelelo lokuthenga luba namandla.
ETHUSD, Itshathi yemihla ngemihla-Novemba 29
Ukunyuka kwamaxabiso kutshanje kunike i-RSI inyuke kancinci ngaphezulu kwamanqanaba ayo angama-30. Iqela elomeleleyo lokuqhubela phambili linokuqhubeka nokugcina i-RSI inyuka inyuka, isenza ukuba ixabiso le-ETH lifikelele kwindawo ethe kratya kungabikho xesha. Okwangoku, i-MACD ye-Ethereum ikummandla we-bearish. Ulwandiso olusezantsi lwe-oscillator lunokuqengqisa ixabiso libuyele kwinkxaso yemali kwi-141 kunye ne-131 yeedola.
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH): Itshathi yeYure-Bullish
Ukusukela oko u-Ethereum aqhekeza ipateni yonxantathu, isenzo sexabiso besizula ecaleni, ngoku sihleli kunxantathu owaphukileyo. Nangona kunjalo, ixabiso ngoku lenza umda okhulayo. Kodwa kubonakala ngathi intengiso ikhangele ukubuyela umda kumda ongezantsi wedge kwi $ 150 ngaphambi kokubuyela umva. Ukuqhuba ngaphantsi komtshato kungathumela i-ETH kufutshane nenkxaso kwi- $ 141.
ETHUSD, Itshathi yeYure-Novemba 29
Ukugxotha kwi-wedge kuya kuba kukuhamba ngokugqibeleleyo kwaye ngakumbi amava anomdla kwiinkunzi zeenkomo. Ukuchasana okulandelayo kokujonga i-156 yeedola, kulandele i-160 yeedola- apho umda wedge ophezulu ulala khona. Siyabona ukuba u-Ether ngoku ulele kwinqanaba eliphakathi lezalathi zobuchwephesha ukubonisa imakethi engenazigqibo. Nangona kunjalo, kusenokufuneka silinde ixesha elithile ukuze sibone owona mdlalo ngaphambi kokuthatha indawo.
I-ETHEREUM YENZA UKUTHENGA UMSEBENZI
Thenga ukungena: $ 150.87
I-TP: $ 160
tags uhlalutyo, ETH, Ukubikezela
Ilawulwa yiBhele ngexesha leshumi elinanye le-AUDUSD yeTrends ezisezantsi zedlulileyo 0.6769 kwinqanaba leNkxaso ephambili
28 Novemba 2019 | Ukuhlaziywa: 28 Novemba 2019
Uhlalutyo lwamaxabiso e-AUDUSD-Novemba 28
I-AUDUSD yehlile kwiseshoni ephantsi kwinqanaba elidlulileyo kwi-0.6769 kwaye ngoku icela umngeni kummandla ophantsi wemihla esezantsi kwinqanaba le-0.6759 elibonelela ngomgca ongezelelweyo wokuzikhusela kubathengisi kwinqanaba le-0.6759 -uhleli kufutshane.
Amanqanaba okumelana: 0.7085, 0.7001, 0.6929
Amanqanaba enkxaso: 0.6759, 0.6710, 0.6670
Okwangoku, inqanaba lotshintshiselwano luvavanya inqanaba lenkxaso elenziwe yinkxaso yemihla ngemihla kufutshane nenqanaba lendawo eyi-0.6769. Ukuba inqanaba lenkxaso liyabamba, ukubuyela umva ngokufutshane kumndilili wokuhamba kwemihla ngemihla kwinqanaba elikwi-5 kunokulandela.
Ngokubanzi, ngokuxhathisa okungagungqiyo kwinqanaba le-0.7085, ukubuyela umva komgangatho akuqinisekiswanga ngokucacileyo. Oko kukuthi, imeko esezantsi ukusukela ekuweni ukusuka kwindawo ephezulu kulindeleke ukuba iqhubeke iye kwinqanaba le-0.6670 (esezantsi) kwakhona.
Ukwehla kwe-AUDUSD kwenqanaba kwi-0.6929 kusaqhubeka. Ukuphakama kwangaphakathi kuhleli phantsi ukuphinda kuvavanyo lwenqanaba kwi-0.6670 kuqala. Kwicala elingasentla, ukuxhathisa ngaphezulu kwenqanaba kwi-0.6803 ukumelana okuncinci kunokubangela ukuthothisa ngaphakathi kwaye kunike ukubuyisela kwimeko yesiqhelo. Kodwa ukunyuka kufuneka kuncitshiswe kakuhle kwinqanaba lokumelana no-0.6929.
Abathengisi banokuthatha ithuba lokuhamba ukuba amaxabiso ahlala engaphantsi komgangatho ophantsi wenqanaba kwi-0.6769, apho ezinye iindawo zokuthengisa zinokusebenza. Umbono uhlala u-bearish, ubonakalisa ukungahambi kakuhle kwixesha elifutshane, nakwixesha elide.
Ixabiso lokungena: 0.6769
I-India Amehlo eBlockchain iTeknoloji yokwamkelwa
Urhulumente wase-India ulungiselela imodeli yesizwe ngokubanzi yokuxhasa ukusetyenziswa kwe-blockchain kwilizwe.
Umphathiswa wezombane we-elektroniki kunye ne-IT uSanjay Dhotre ubhengeze ngomhla we-27 kweyeNkanga ukuba abaphathi baqulunqa iiplani zokukhupha iNkqubo-sikhokelo yeNqanaba leSizwe elithetha ngamathemba obuchwephesha bokusasazwa kweleja kunye nokwamkelwa kwayo.
Esi sibhengezo saziswa ngeleta nguDhotre, ephendula imibuzo kwimicimbi ye-blockchain yindlu esezantsi yePalamente yaseIndiya.
Ilungu lePalamente uParvesh Sahib Singh Verma waphosa umbuzo ku-Dhotre, ebuza ukuba ngaba ulawulo lwenzile uphando malunga nokusetyenziswa kwetekhnoloji ye-blockchain kwaye zithini iziphumo zophando olo umphathiswa aphendule ukuba i-arhente ibonile itekhnoloji ye-blockchain njengendawo ebalulekileyo oko kungazisa uphuhliso kwiinkqubo ezinjengeebhanki, ukhuseleko lwe-cyber kunye nezinye ezininzi.
Ileta ichaze ukuba ulawulo luzinzise iZiko eliHanjisiweyo lokuGqwesa kwiTekhnoloji yeBlockchain eya kuthi isebenze njengequmrhu lokuphuhlisa nokwenza uphando lweenkqubo ze-blockchain kunye nokusetyenziswa kwayo.
Izikimu ezininzi zeBlockchain eIndiya
Eli nyathelo likubonile ukusekwa kophuculo lomhlaba njengeenkqubo ze-blockchain zoluhlu lwezabelo kwiLizwe laseTelangana, ulungiso lobungqina bemeko yokuQinisekiswa koKhuseleko kweLifu kunye nemali yorhwebo.
Iinkqubo ezongezelelweyo esele zikhona ezibandakanya ukuqinisekiswa kweerekhodi zemfundo ngemodeli yobungqina kunye nokubekwa kweliso kwihotele.
Ngo-Okthobha, u-Tech Mahindra wazise ukuba usebenzisana ne-blockchain app incubator, iQuantoz ukuhambisa iindlela zokuhlawula ezinokuthenjwa.
Ngapha koko, umphathiswa wezokhuseleko welizwe okhokelwa nguRajnath Singh watyhila kudliwanondlebe lwakutsha nje ukuba icandelo lezokhuseleko liceba ukusebenzisa iteknoloji ye-blockchain.
Ukungqinelana okungqongqo ukuya kwiiBlockchain ezinxulumene nokuSekwa ​​eIndiya
Nangona i-India ikhuthaza ukwamkelwa kwe-blockchain, ifake imithetho ebeka imiceli mngeni kumashishini ahambelana ne-crypto.
Ibhanki ephezulu ye-India nayo yadlulisa umthetho kwiibhanki zorhwebo ukuba ziyeke ukubonelela ngeenkonzo kumashishini e-crypto.
I-Facebook ikwazise ukuba ayizukumilisela iStablecoin, iLibra, e-India ngenxa yeengxaki zolawulo.
tags Ukwamkelwa kukaBlockchain, Cryptocurrency, Indiya